ခရီးကပြန်လာတာနဲ့ ချစ်သူဆီကိုအပြေးသွားပြီးချုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ – Cele Zone
ခရီးကပြန်လာတာနဲ့ ချစ်သူဆီကိုအပြေးသွားပြီးချုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ
ပြည်တော်ချစ်မင်းသမီးချောလေး အကယ်ဒမီ အေးမြတ်သူတစ်ယောက်ဟာ လတ်တလောမှာဆိုရင် ခရီးလေးတွေဆက်တိုက်ထွက်ဖြစ်နေဝာာကိုပရိသတ်တွေသိမှာပါနော်။ သူမဟာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံး၊ လာရှိုးနဲ့ ရွှေစက်တော်တွေအထိကို လှည့်ပတ်ကာ ပျော်ပျော်ပါးပါးခရီးလေးတွေထွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးတွေထွက်ရင်းနဲ့ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာ မပြတ်တမ်းမျှဝေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ ဟိုပုံး‌မြို့လေးကနေခရီးစခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးတော့ ရွှေစက်တော် မှာတော့ သူမရဲ့ အပျော်ခရီးလေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ သူမဟာ အိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ အိမ်ရောက်တာနဲ့ နားချိန်မရဘဲ လုပ်စရာတွေတန်းစီနေတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်ရသူဆီကိုအပြေးသွားပြီးချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေကို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
” သွားချင်ရာတွေသွားပြီးရင်… မိသားစုနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲလေးပြေးရသေး လုပ်ချင်ရာတွေ.. လုပ်….. ချစ်သူကို ပြေး…ချုပ်….မိသားစု ကို ပြေး… ချို….အလုပ်တွေ ပြန်ပြေး…လုပ် နားရတယ်ကို မရှိဘူး.. ဒီနေ့…. ချစ်ချစ်တုန်လေး ကို အချိန်လေးနဲနဲပေးရင်း လည်လည်သွား အချစ်ရဆုံးက်ုကြီး က လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ တူလေးပိစိကွေး ချစ်ကြည်ရေးပွဲ က အသင်းသားတယောက်တိုးလာတော့ သွားနေကြနေရာတွေထက်… နေရာသစ်လေးတွေတိုးလာပြီရှင့်” ဆိုပြီးတော့လည်း ချစ်ရတဲ့တူလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအကြွားပိုထားပြန်ပါတယ်။ကဲ… ခရီးကပြန်ရောက်လို့နားချိန်မရှိပေမယ့် ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်လို့နေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို CeleZoneချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခရီးကျပန္လာတာနဲ႔ ခ်စ္သူဆီကိုအေျပးသြားၿပီးခ်ဳပ္ခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ ေေအးျမတ္သူ
ျပည္ေတာ္ခ်စ္မင္းသမီးေခ်ာေလး အကယ္ဒမီ ေအးျမတ္သူတစ္ေယာက္ဟာ လတ္တေလာမွာဆိုရင္ ခရီးေလးေတြဆက္တိုက္ထြက္ျဖစ္ေနဝာာကိုပရိသတ္ေတြသိမွာပါေနာ္။ သူမဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဟိုပုံး၊ လာရႈိးနဲ႔ ေ႐ႊစက္ေတာ္ေတြအထိကို လွည့္ပတ္ကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးခရီးေလးေတြထြက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးေတြထြက္ရင္းနဲ႔ သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ လူမႈစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ မျပတ္တမ္းမွ်ေဝေပးေနခဲ့ပါတယ္။
သူမဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းက ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဟိုပုံး‌ၿမိဳ႕ေလးကေနခရီးစခဲ့တာပဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေ႐ႊစက္ေတာ္ မွာေတာ့ သူမရဲ႕ အေပ်ာ္ခရီးေလးကို အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူမဟာ အိမ္ကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ နားခ်ိန္မရဘဲ လုပ္စရာေတြတန္းစီေနတဲ့အျဖစ္ကိုလည္းေျပာျပထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခ်စ္ရသူဆီကိုအေျပးသြားၿပီးခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ပရိသတ္ေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။
” သြားခ်င္ရာေတြသြားၿပီးရင္… မိသားစုနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲေလးေျပးရေသး လုပ္ခ်င္ရာေတြ.. လုပ္….. ခ်စ္သူကို ေျပး…ခ်ဳပ္….မိသားစု ကို ေျပး… ခ်ိဳ….အလုပ္ေတြ ျပန္ေျပး…လုပ္ နားရတယ္ကို မရွိဘူး.. ဒီေန႔…. ခ်စ္ခ်စ္တုန္ေလး ကို အခ်ိန္ေလးနဲနဲေပးရင္း လည္လည္သြား အခ်စ္ရဆုံးက္ုႀကီး က လက္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ တူေလးပိစိေကြး ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲ က အသင္းသားတေယာက္တိုးလာေတာ့ သြားေနၾကေနရာေတြထက္… ေနရာသစ္ေလးေတြတိုးလာၿပီရွင့္” ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ခ်စ္ရတဲ့တူေလးနဲ႔႐ိုက္ထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကိုအႂကြားပိုထားျပန္ပါတယ္။ကဲ… ခရီးကျပန္ေရာက္လို႔နားခ်ိန္မရွိေပမယ့္ ခ်စ္ရတဲ့ မိသားစုနဲ႔အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္လို႔ေနတဲ့ ေအးျမတ္သူရဲ႕ပုံရိပ္ေလးေတြကို CeleZoneခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မျက်မှန်ကိုဇောက်ထိုးတပ်ကာ စတိုင်အဆန်းထွင်ပြီး မူကြိုသွားတက်ခဲ့တဲ့ lvyလေး
ငွေဆောင်ကမ်းခြေလေးထက်မှာ (၃)နှစ်ပြည့် Anniလေးကို ဘိုဆန်ဆန်လေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းဦး
ကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေခဲ့ကြတဲ့ ညီအမတွေနဲ့အတူ လူစုံတုန်း ထမင်းလက်ဆုံစားခဲ့တဲ့ အေးသောင်း